JACK RUSSELL TERRIER DOG FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA SY SARY - ALIKA
Jack Russell Terrier Dog fampahalalana momba ny fiompiana sy sary
Fampahalalana sy sary
Jack Russell Terrier, olon-dehibe purebred
Milalao Trivia Alika!
Lisitry ny Jack Russell Terrier Mix Dogs
Fitsapana ADN momba ny alika
Tsy manohana ny tag ny audio ny browser-nao.
Ny Jack Russell dia tertera mafy orina sy henjana ary eo amin'ny rantsantongony hatrany. Ny halavan'ny vatana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny hahavony, ary tokony haneho sary mifandanja sy voalanjalanja izy io, ary ao anaty toe-javatra mafy sy mafy. Ny loha dia tokony ho voalanjalanja tsara sy mifanaraka amin'ny vatana. Ny karan-doha dia tokony ho fisaka, ny sakany antonony eo amin'ny sofina, manakaiky ny maso. Ny fijanonana, izay faritry ny tetezamita hatrany am-baravarankely ka hatrany am-bavony, dia tokony faritana fa tsy tokony hotononina loatra. Ny halavan'ny molotra avy amin'ny orona mankany amin'ny fijanonana dia tokony ho somary fohy kokoa noho ny elanelana avy amin'ny fijanonana mankany amin'ny sokotra. Tokony mainty ny orona. Ny valanorano dia tokony ho matanjaka sy sarony tsara amin'ny takolaka misy hozatra mafy. Ny maso dia tokony ho amandy, loko mainty ary feno fiainana sy faharanitan-tsaina. Ny sofina bokotra kely miendrika V dia entina mandroso, manakaiky ny loha ary matevina antonony. Mihoatra nify izy io, ary ny ambony kosa somary mifanindry ny ambany. Manaikitra roa ny haavon'ny sy hety azo ekena, miaraka amin'ny hety no tiana kokoa. Madio sy hozatra ny hatoka, lava ny halavany, mihalalaka tsikelikely eo an-tsoroka. Ny soroka dia tokony hikorisa ary hipetraka tsara, tsara amin'ny teboka ary voakapa mazava amin'ny malazo. Forelegs dia tokony ho matanjaka sy mahitsy sarona miaraka amin'ny tonon-taolana mifanaraka tsara. Ny kiho mihantona perpendikular amin'ny vatana ary miasa tsy misy sisiny. Ny tratra dia tokony ho ambany, tery ary ny tongotra eo anoloana tsy mifanalavitra loatra, manome atletika fa tsy endrika tratra be. Amin'ny maha-mpitari-dalana azy fotsiny, ny tratra dia tokony ho kely kely mba hiparitaka mora foana ao ambadiky ny soroka, amin'ny tanana antonony, raha toa ka milamina sy miasa ny terrier. Ny lamosina dia tokony ho matanjaka, mahitsy ary, raha oharina amin'ny haavon'ny tertera, manomeza sary voalanjalanja. Ny valahana dia tokony atsivalana kely. Ny aoriana dia tokony ho matanjaka sy hozatra, mifangaro tsara miaraka amin'ny angotra tsara sy miondrika amin'ny stifle, manome fiara sy famporisihana betsaka. Raha mijery avy any aoriana, ny hock dia tsy maintsy mahitsy. Ny tongotra dia boribory, matevina matevina, malalaka, toa ny saka, sady tsy mihodina no tsy mivoaka. Ny rambo dia tokony hapetraka avo kokoa, entina mandehandeha ary mifanaraka amin'ny halavan'ny vatana, matetika tokony ho efatra santimetatra ny halavany (rehefa apetaka), manome tànana tsara. Fanamarihana: ny fomba fanao fanapahana rambo (docking) dia tsy ara-dalàna any amin'ny firenena sasany. Ny palitao an'i Jack dia malama, nefa tsy dia lavitra loatra ka tsy manome fiarovana isan-karazany amin'ireo singa sy ala ambanin'ny tany. Voaravaka tery na vaky, tsy misy volon'ondry. Ny palitao vaky dia midika fa ny alika dia mitambatra amin'ny palitao malefaka sy marokoroko miaraka amina volo lava volo mifangaro amin'ny palitao fohy. Loko: ny fotsy dia tokony hihoatra ny toerana (ie, tokony ho mihoatra ny 51% fotsy) misy marika mena, mainty na volontany. Ny marika brindle sy ny loko mainty ary ny volon-koditra dia mitranga ao anatin'ny karazany fa tsy fahita firy. Gait: ny hetsika dia tokony ho maimaimpoana, velona, ​​mandrindra tsara miaraka amin'ny hetsika mahitsy eo aloha sy ao aoriany. Ny fery na ratra taloha, vokatry ny asa na ny lozam-pifamoivoizana, dia tsy tokony havela hanavakavaka ny vintana ataon'ny terrier amin'ny peratra fampisehoana raha tsy hoe manelingelina ny fihetsik'izy ireo izany na amin'ny fampiasana azy io na ho an'ny asa na stud. Ny karazana Irlandey antsoina hoe Jack Russell Shortys dia fohy kokoa ny tongony noho ny an'ny anglisy.
Ny Jack Russell Terrier dia alika falifaly, ravoravo, mahafoy tena ary be fitiavana. Miorina am-panahy sy mankato izy io, nefa tsy misy tahotra tanteraka. Mitandrina sy mahatsikaiky izy, mankafy lalao sy milalao kilalao. Ny Jack Stable dia sariaka ary tsara fanahy amin'ny ankizy amin'ny ankapobeny. Tokony ampianarina ny ankizy mba tsy haneso na hamely ny alika. Manan-tsaina izy ireo, ary raha avelanao haka iray santimetatra izy ireo dia mety ho tonga fanahy iniana sy tapa-kevitra handray iray kilaometatra. Zava-dehibe indrindra fa an'ity alika ity ianao mpitarika fonosana . Mila omena fitsipika arahana izy, ary ferana ny maha-izy azy sy ny toetrany tsy mahazo manao . Aza avela hilatsaka ao ity alika kely ity Syndrome kely alika , izay hinoany fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona rehetra. Io no hipoiran'ny olana isan-karazany eo amin'ny fitondran-tena, ao anatin'izany, fa tsy ferana fiambenana , snapping, fanahiana fisarahana , ary ny fivoakan'ny saina mibontsina. Tena mahay miofana izy ireo ary mahavita fika mahavariana. Nampiasaina tamin'ny fahitalavitra sy sarimihetsika izy ireo. Na izany aza, raha tsy mampiseho fahefana amin'ny alika ianao dia mety ho sarotra ny mampiofana. Mila mpampiofana matanjaka sy za-draharaha ity karazana ity. Jacks izay navela handray azy dia mety ho mahery setra amin'ny alika hafa. Ny sasany namono na novonoina tamin'ny ady alika. Aza hadino ny mampiaraka ny Jack. Izy io dia manana instincts mihaza mahery (mahery noho ny salan'isa tereneranao) ary tsy tokony hatokisana biby kely hafa. Ity alika mpihaza ity dia tia manenjika, mitrandraka, mivovo ary mihady. Avelao fotsiny izy hitarika raha voaofana tsara na amin'ny faritra azo antoka. Hanjary tsy milamin-tsaina sy manimba raha tsy mahazo fanatanjahan-tena ampy ary hetsika atao hibahana ao an-tsainy. Mihanika i Jack Russells, izay midika fa afaka mianika fefy iray izy ireo dia mitsambikina koa. Jack izay mijoro 12 santimetatra ny haavony dia afaka mitsambikina mora foana ny tongotra dimy. Ny JRT dia tsy karazany ho an'ny tompon'alika tsy za-draharaha. Ny tompony dia mila matanjaka be toa ny alika, na ity tovolahy kely ity no handray an-tanana. Miaraka amin'ny tompony mety dia tena mahay mihintsy i Jack, saingy tsy amporisihina ho an'ireo izay tsy mahatakatra ny dikan'ny hoe mpitondra alika tena izy. Ny jacks izay milamina ara-tsaina, miaraka amin'ny instincine canine rehetra nihaonany, dia tsy hampiseho ireo fihetsika ratsy ireo. Tsy toetran'ny Jack Russell izy ireo, fa kosa fitondran-tena entin'ny olombelona , izay vokatry ny fitarihana tsy mahomby, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fanentanana ara-tsaina sy ara-batana . Hivelatra amin'ny asa tokony hatao izy ireo. Ny Jack Russell Terrier dia tsy maintsy mampiseho endrika velona, ​​mavitrika ary mailo. Tokony hampiaiky volana azy ny toetrany tsy misy tahotra sy falifaly. Tokony ho tsaroana fa ny Jack Russell dia tertera miasa ary tokony hitazona ireo toetra ireo. Ny fahasahorana, ny hakanosana na ny fanaovana an-keriny be loatra dia tokony hahakivy ary tokony hiseho ho matoky tena hatrany izany.
Hahavony: 8 - 15 santimetatra (20 - 38 cm)
Lanja: 11 - 18 pounds (5 - 8 kg)
alika mainty sy mainty lehibe
Ny sasany dia mora tratry ny fihintsanan'ny kneecaps, areti-maso nolovaina, marenina ary Legg Perthes - aretin-kitrokelin'ny alika kely. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Jack Russell sy Dachshund mifangaro
Ny Jack Russell Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany iray farafahakeliny farafahakeliny.
Ny Jack Russell Terrier dia mpiara-miasa mahafinaritra rehefa ampiharina tsara kanefa raha tsy ampy dia mety hanelingelina izany. Mila alaina haingana, isan'andro, haingana MANDEHANA . Ho fanampin'izay, ho eo amin'ny voninahiny miaraka amin'ny habaka mihazakazaka, mihaza ary milalao izy.
Raha avela irery i Jack mandritra ny andro, na ao amin'ny trano na trano io, dia tokony ampiasaina tsara alohan'ny handehanan'ny olombelona hiasa amin'ny alàlan'ny mandeha an-tongotra lavitra na mihazakazaka , ary avy eo dia avoaka indray rehefa mody.
Andrasana amin'ny fiainana
Manodidina ny 15 na mihoatra ny taona.
Ankizy 4 ka hatramin'ny 8 eo ho eo
Ny karazana palitao rehetra dia mora karakaraina. Manosotra sy miborosy matetika amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Mba hampisehoana dia tsy maintsy esorin'ny tompony ny palitao. Toy ny palitao marokoroko, ny Jack nopetahany paty dia mila esorina koa. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny karazana dia nomena anarana taorian'ny mpitondra fivavahana iray antsoina hoe Rev. John Russell. Izy io dia nampiasaina ho alika fihazana lalao kely indrindra ho an'ny amboahaolo mena, nandavaka ny vakoka tany an-davaky ny tapaky ny taona 1800. Amin'ny alika haza anglisy, ny alika dia mila lava tongotra lava mba haharaka ny hazondamosina. Ireo mpiompy dia nanantitrantitra ny fahaizany miasa, noho izany ny fenitra dia malalaka tokoa, mamela karazana karazan'olona ekena. Tsy faly tamin'ity karazana Jacks isan-karazany ity, hatramin'ny 1 aprily 2003 ny Jack Russell Terrier Association of America dia novaina ho Parson Russell Terrier Association of America. Ny karazana miasa dia nijanona Jack Russells raha ny karazana fampisehoana amerikana dia nanjary fantatra amin'ny anarana hoe the Parson Russell Terrier . Ny sasany amin'ireo talentan'i Jack Russell dia misy: mihaza, manara-dia, mailaka ary manao hafetsena. Jack Jack Ter Terre iray antsoina hoe Moose no nilalao an'i Eddie Crane tao amin'ny fahitalavitra sitcom Frasier.
aostraliana mpiandry ondry volamena retriever afangaro alika kely
ACR = Registera canine amerikana
CET = Club of Terriers Espaniola ( Club Terrier Espaniola )
CKC = Club Kennel Continental
IKC = Club Kennel Irlandey
KCGB = Kennel Club any Great Britain
JRTCA = Jack Russel Terrier Club any Amerika
NAPR = Avaratra Amerikana Purebred Registry, Inc.
Ny FCI, ANKC, ary IKC dia manaiky ny kilaoty fohy toa an'i Jack Russell Terriers ary ny UKC dia manaiky ny fohy toa an'i Russell Terriers. Ny Parsons dia i Jack Russell Terriers manana tongotra lava voalaza anarana ofisialy Parson Russell Terriers . Ny Jack Russell Terrier sy ny Russell Terrier dia karazany iray ihany, fa samy hafa tanteraka amin'ny Parson Russell Terrier.
Nanaiky ny Jack Russell Terrier any Irlandy ny Irish Kennel Club, nandray ny fenitra FCI ho an'ny karazany. Nisy fotoana nanaiky ny AKC an'i Jack Ter Terre ny AKC, na izany aza tamin'ny 1 aprily 2003 dia novain'izy ireo ho Parson Russell Terrier. Nizara roa ny karazany ary ankehitriny ny Jack Russell Terrier sy Parson Russell Terrier dia raisina ho karazany roa samy hafa. Ny fanovana ny anaran'ny Parson dia ampahany lehibe amin'ny fanenjehana avy amin'ny JRTCA mankany amin'ny AKC, raha navela hisoratra anarana ny karazany. Ho fanampin'izany AKC, toy ny UKC, dia manaiky izao antsoin'izy ireo hoe Russell Terrier, izay tongotra fohy kokoa noho ny Parson Russell Terrier.
tahaka ny ahoana ny voromahery
Tadiavo ny JRT tongotra fohy amin'ny 6 taona— 'Alika mahafinaritra be izy, tia milalao 24/7 ary tia ny baoliny.'
Tadiavo ny JRT tongotra fohy amin'ny 6 taona
Ny fanafarana belza dia nisoratra anarana tamin'ny FCI ho Jack Russell Terrier, UKC toa an'i Russell Terrier ary IABCA any Etazonia satria i Jack Russell Terrier dia misolo tena an'i Jack Russell Terrier fohy, 10 'lava.
Ity no Champion Elk Creek Gaffer izay laharana 2 any Etazonia ho an'ny 2003, ary izy no misolo tena ny karazana UKC fanta-daza Russell Terrier.
English JRT Gemma avy any Caldbeck amin'ny 2 taona
Sary natolotry ny Three Mile Jacks
Dobie ilay mainty sy mainty Jack Russell Terrier amin'ny 10 volana— 'Dobie no anarany, na izany aza antsoinay hoe Dum-Dum, izay mahatsikaiky satria tena hendry sy be fitiavana izy. Ny namako dia nividy azy tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako tamin'ny volana martsa lasa teo. Rehefa nandeha naka azy izahay dia nanana karazana pups isan-karazany isafidianana. Izy rehetra dia fotsy fotsy mahazatra miaraka amin'ny marika misy loko isan-karazany. Izy irery ihany no mainty sy mainty. Nilaza ilay lehilahy fa tena tsy fahita firy izy. Nilaza ihany koa izy fa tsy nanana afa-tsy zanak'alika hafa miloko toa an'i Dum-Dum. Tianay izy satria hafa izy. Tena tiako izy sy ny mpiara-miasa amiko ary tsara amin'ny zanatsika koa izy. Dum-Dum dia manana lamba firakotra sy ondana ao am-pandriana miaraka amintsika. Tsy handry na hatory izy raha tsy manana lamba firakotra sy ondana ary tsy maintsy eo akaikin'ny namako izy. '
Sophie dia ohatra iray amin'ny karazany fohy kokoa toa an'i Jack Russell izay mifanohitra amin'ny karazana leggier.
Jack Russell Terrier, karazana anglisy, miaraka amin'ny tongotra lava kokoa
schnauzer kely sy shih tzu mifangaro
Jereo ny ohatra misimisy momba ny Jack Russell Terrier
Jack Russell Terrier Sary 1
Jack Russell Terrier sary 2
Jack Russell Terrier Sary 3
Alika kely vs. Alika antonony sy alika lehibe
Kemmer Stock Mountain Curs
Fahatakarana ny fitondran-tena alika
Alika Jack Russell Terrier: Sarivongana Vintage azo angonina
Lisitry ny alika malefaka mifono varimbazaha mifangaro vy
Lisitry ny alika mpiady boxer
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Cava-Corgi
Fampahalalana sy sary momba ny alika laekenois belza
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shih Apso
Editor Ny Choice
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Xoloitzcuintli
Fampahalalana sy sary avy amin'ny alika mpiandry ondry Airedale
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Pyrenees Husky
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika soedoà soedoà
vava mainty cur hound mix
rat terrier chihuahua mifangaro alika kely
shar pei sy pit bull bull
sary mifangaro yorkie sy poodle
mpanjaka mainty sy fotsy charles spaniel
volontany sy mainty dane lehibe